Ny adihevitra teo amin'i Mark Rutte sy Thierry Baudet ny porofo tsy tokony hifidiananao: Martin Vrijland
Ny adihevitra teo amin'i Mark Rutte sy Thierry Baudet dia manaporofo fa tsy tokony hifidy ianao
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 23 May 2019	• 6 Comments
Izany avy amin'i Jeroen Pauw ao amin'ny Red Hat any Amsterdam fihetsika fandrindrana (antsoina hoe adihevitra) teo amin'i Marc Rutte sy Thierry Baudet, araka ny hevitro, ny porofo lehibe hoe miady amin'ny mpilalao ambony isika. Ireo mpilalao ambony indrindra izay manakimpy ny masonao. Tao anatin'ity adihevitra ity dia nahita mpitaingina chattera tsara roa izahay, izay samy nanome porofo velona fa tsy misy dikany ny safidinareo, fa afaka mifindrafindra avy amin'ny sambo A ihany izahay amin'ny sambo B io fiaramanidina io, ary io fiaramanidina io dia mivezivezy eny an-dàlana mitovy. Ny sambo FVD dia toa maniry ny handeha amin'ny lalana vaovao tanteraka noho ny sambo VVD, fa izany no fanamarihana fa i Thierry Baudet dia tsy maintsy mamorona mba hampiroborobo anao ao amin'ny tambajotra fiarovana; ny tambajotra fiarovana izay efa noresahiko betsaka tao amin'ny tranokala.
Ny fandrefesana dia tokony ho fantatra, ary nandritra ny taona maro dia nisy ny fanehoan-kevitra goavana tany Holandy izay tsy niombon-kevitra tanteraka tamin'ny politikan'ny governemanta holandey. Ny fanadihadiana goavana dia afaka manao izany mora foana ary na manao ahoana na manao ahoana no ataonao izay tsara indrindra amin'ny tatitra momba ny fampielezan-kevitra momba ny fampielezan-kevitra momba ny radio, ny fahitalavitra ary ny gazety; Izany vondrona izany dia tsy dia nanjary tena kely. Noho izany dia tokony ho azo antoka foana fa manana mpandika teny ho an'io vondrona io ianao. Ny famonoana an'i Pim Fortuyn dia tsy tena nanampy, ary ny fanamparam-pahefana an'i Geert Wilders sy ny fampifandraisana ny antokony amin'ny fanambarana mahery vaika toy ny "Marokanina vitsivitsy" dia tsy tena nanampy. Izany ihany koa ny tranga izay mahatonga an'i Eoropa anjara andraikitra lehibe.
Navelan'i Thierry Baudet omaly, niaraka tamin'i Mark Rutte, ny fomba fiasan'ny stratejika momba ny fandriam-pahalemana sy ny fomba fametrahan'ny lehilahy roa eo ambany sainan'ny tompon'ny fiaramanidina. Izany no mahatonga ny roa miantso amin'ny faran'ny adihevitra hiditra ao amin'ny biraom-pifidianana ho tena izy sy azo antoka. Ny adihevitra toy izany dia tsy zavatra hafa afa-tsy ny asa mahomby. Azonao ampitahaina amin'ny baolina kitra izay fantatsika avy amin'ny fahitalavitra amerikana, izay ahafantaran'ireo mpilalao hoe inona no azon'izy ireo azony ary inona no mety hahazoana tombony. Eo am-panaovana ny tombon-tsoa sy ny fatiantoka efa neken'izy ireo mialoha; Na izany aza dia toa mitranga tampoka ny fifanakalozan-dresaka ary misy fery mavesatra sy lehibe.
Izany fitongilana goavana ataon'ny olona izay mahafantatra fa nandainga tamin'ny governemanta isan-taona izy ireo, na inona na inona antoko nifidianany, dia mitombo hatrany manerana an'i Eoropa. Koa raha te hiara-mitazona zavatra ianao dia tsy maintsy manararaotra an'io vondrona io. Miantso aho fa ny paikady momba ny fandriam-pahalemana eto. Noho izany dia mila sambo miaraka amin'ny kapiteny iray ianao mba handroaka ny fanaka ho an'ireo trondro izay mikasa ny hilomano manohitra ny ankehitriny. Raha toa ny mpitarika ara-politika (mpilalao sarimihetsika) misolo tena an'ity vondrona ity dia mahazo fanohanana be loatra, manaisotra baomba atsy ho atsy etsy sy eroa mba hampihena ny vondrona. Amin'ny ankapobeny, ny tetikady amin'izao fotoana izao dia manerana an'i Eoropa (ary na dia any Etazonia aza): Voalohany dia mitombo ny vondrona dia mihamitombo, manaparitaka azy amin'ny nasionalista, proteista, mpitsikera (miaraka amin'ny fanilihana fitarainana conspiracy) ary ny marina. Avy eo dia avelanao hitrandraka ireo hetsika ara-politika ireo, hany ka misarika ny sain'ny vahoaka betsaka. Amin'izay ianao dia mahatonga azy ireo ho tompon'andraikitra amin'ny tsy fahombiazan'ny toekarena sy ara-tsosialy ary amin'ny 1x ianao dia miatrika ny tsikera avy amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny ary afaka mandresy lahatra ny vahoaka fa tsy misy afa-tsy 1 marina ary izany dia ny fanatontoloana sy ny fananganana fahefana.
Izany no mahatonga antsika rehetra hahita fa ireo mpitarika politika dia mifamatotra amin'ny tsindry. Ireo tsindrona ireo dia noforonina (amin'ny alalan'ny fampitam-baovao) ary tamin'ny alina lasa dia hitanay fa navelan'i Mark Rutte nampifanitsy ireo mari-pamantaranandro ireo tao Thierry Baudet. Raha ny marina, ireo mari-pamantarana ireo dia napetraka aminao, ilay mpifidy. Izany indrindra no fikasana. Hiantehitra amin'ny marika ianao. Hanasongadina anao. Ny hevitrao dia mifamatotra amin'ny marika efa voafaritra mialoha amin'ny alàlan'ny media ary amin'ny alalan'ny fironan'ny fironana politika. Io marika io dia marina, tsy tia vehivavy, anti-EU (na nasionalista), mihodina manerana ny firenena (sisintany mihidy), firenena anti-Islam, volom-bola manokana sy tombontsoa ara-barotra voalohany, mpino mpiondana rivotra sy mpino amin'ny teorika (toy ny fields of scandal of history). Ny Brexit, Nexit, Frexit (etcetera) dia vondrona izay afaka mahazo fanohanana manerana an'i Eoropa.
Miaina vondron'olona goavana ny fihetseham-po ary tsy ela dia tsy maintsy atao amin'ny ankapobeny izany fihetseham-po izany mifandray amin'ity marika ity. Raha afaka mampifandray ny zava-drehetra amin'ny iray sy ny marika iray ianao ary avelanao hivoatra io vondrona io, dia afaka manaisotra ny baikom-panorenana ianao ary mametaka ny sambo. Azonao atao ny manimba ny sambo fiaramanidina tsy miankina (izay nahazo ny marika iray nanerana an'i Eoropa sy Etazonia ihany koa).
Mikarakara tranga sasany ianao eto sy eto, hany ka efa mitranga ny fifandonana misy eo amin'ilay marika vaovao. Ireo dia mety ho korontana ara-politika isan-karazany, fa ambonin'izany rehetra izany, ny antontan'isan'ny fitondrana ara-politika, ny tsy fitoviana, sns. Farany anefa, ny tanjona dia ny hahatonga ny vondrona (ny marika vaovao) tompon'andraikitra amin'ny tsy fahombiazan'ny toekarena sy sosialy. Ny Brexit dia manatanteraka io tanjona io. Izany ihany koa no antony nahatonga ny fitsapa-kevi-bahoaka Brexit talohan'ny nandaozany ny EU dia navela handresy. Izany no antony mahatonga an'i Theresa May, miaraka amin'ny mpanao politika britanika rehetra (mpilalao), ary mety tsy hahomby ny fizotran'ny Brexit. Amin'ny tarehimarika sy amin'ny vokatra hafa, ny Brexit dia tsy maintsy mamadika endriky ny jamba eo amin'ny vondrona havanana (ny marika vaovao izay azo ampifandraisina amin'ny karazana hevitra rehetra). Ny sambo fiara fitaterana (ny fiaramanidin'ny sambo manontolo amin'ny marika vaovao) dia tsy maintsy afenina mba hahafahan'ireo olona mandripaka any anaty fiaramanidina tranainy. Ny fiaramanidina tranainy izay mitarika anao ara-drariny manoloana ny fanatontoloana sy ny fampivoarana ny fahefana.
Ny hany fomba hanehoana ireo mpanao politika dia ny manakana ny fandehanana any amin'ny biraom-pifidianana ary manohintohina ny rafitra eo amin'ny fototra. Thierry Baudet no tetikady ara-barotra amin'ny aterineto izay tsy maintsy maneho ny feo (marika) izay miantso ny ambany fiaramanidina lehibe. Ny fihetseham-po izay fantatry ny olona dia mbola velona, ​​fa izay tokony ho marihina, mba hahafahana manamarina ity olana ity ho an'ny olana rehetra ary ny marika dia mety halefa any amin'ny ankavanana ary ireo olona mamoafady dia afaka haverina any amin'ny sambo avy amin'ny sambo efa hatry ny ela ho. Ho voasazy izy ireo ary hamela azy hiala ao an-tsainy hitsikera indray.
Raha tena maniry ny hiova ianao dia tsy maintsy manary ny fahatokisanao amin'ny politika. Ny fiovàna dia tsy tonga amin'ny fifidianana intsony ho an'ny mpilalao sarimihetsika (mpikatroka ara-bakiteny) izay tokony hisambotra anao. Ny fiovàna dia tonga amin'ny fametrahanao ny asanao, tsy mandeha any amin'ny biraom-pifidianana intsony ary mandroaka ireo mpitantana ny haino aman-jery sy ny politika avy amin'ny fiarovana azy ireo. Tsy tokony hiandrandra ny fanovana avy any ambony ianao, satria izy ireo no mahatonga ny olana ary ny fifidianana ny tetikady manaraka dia tsy hitondra fiovana intsony. Tsy hilevina fotsiny ny sambo fiara fitaterana. Tsy maintsy manao zavatra ianao. Fotoana izao hanovana fiovàna ary revolisiona toy ny voafaritra eto.
Ny kely indrindra azonao atao dia zarao ity lahatsoratra ity araka izay azo atao! Avy eo dia azo antoka fa efa nanomboka ianao.
Lisitry ny rohy loharano: npostrart.nl
Tokony hamaky izany mangina ianao fa misy lesona tena misy eo amin'ny fiainana
Ny fialan'i Henk Otten tao amin'ny Forum for Democracy (FVD) dia azo lazaina ho mialoha
Ny taratasy tsy nosoratana avy amin'i Mark Rutte: Holandey malala
Thierry Baudet sy ny karatry ny fanavakavaham-bolonkoditra nataon'i Kajsa Ollongren natsangan'ny House Clingendael
Ny fahasamihafana eo amin'ny mpiady sy ny miaramila
Tags: Amsterdam, Débat, EU, European, Featured, FVD, satroka, Jeroen, Marka, peacock, mena, Rutte, fifidianana, Thierry Baudet, tv, fifidianana, fifidianana fifidianana, Video, VVD
Neimheid nanoratra hoe:
23 May 2019 amin'ny 09: 47
Famaliana haingana sy ny tena zava-dehibe ... tsara
23 May 2019 amin'ny 10: 04
Marina ianao na amin'ireo roa ireo no tsy mamonjy anay.
Rutte milaza fotsiny fa tsy afaka mandao ny EU noho ny banky Holandey. Ity ny vahaolana raha manana governemanta izay miahy ny vahoaka ianao, mandray ny banky ary manafoana azy ireo. Ny vola mankany Gresy dia tsy namonjy ny vahoaka grika fa ny banky Holandey sy Alemana. Tsy mampaninona ny olona mandainga ary mamono tena na maty avy amin'ny aretina tsotra. Ny ABN amro dia nanao tombombarotra roa lavitrisa isan-taona raha toa ka mbola tsy voaresaka ihany koa ny fanjakana. Vola be no nividy an'io banky io, nefa ny mponina holandey dia nahazo roa arivo tapitrisa isan-taona.
Raha mbola tsy manitsy ny rafitra ara-bola ireo mpitarika antsoina hoe mpitarika antsika ary mifehy ny sehatra na trosa, dia eo izy ireo ho an'ny rafitra.
Ny ankamaroan'ny andrefana dia miasa farafahakeliny ny andro 3 isan-kerinandro ho an'ny banky izay nampindram-bola anao. Vokatr'izany, tsy ampy ny vola hividianana ny zavatra rehetra ary tsy maintsy miasa koa ny reny. Mijery tsara ny ankizy amin'ny fitondran'ny rainy. Ny raim-pianakaviana sy ny reny miasa mafy dia mifarana amin'ny fikarakarana ny reny.
Vahaolana tokana ihany no tokony hampiato ny fifidianana sy ny karama.
Izay rehetra miseho eo amin'ny sehatra, izy rehetra dia manana ny andraikiny hitazona antsika eo amin'ny sehatr'asa.
23 May 2019 amin'ny 10: 12
Ary avy eo mazava ho azy ity: "Raha tsy mifidy ianao, dia tsy afaka mitongilana ianao!"
Fa ny fomba hafa kosa manodidina: raha mifidy ianao tsy mahazo alalana hiditra, satria noho izany dia nomenao ny maha-ara-drariny ny demaokrasia diso izay feno famitahana sy famitahana. Ny zavatra iray izay rafitra diso (demokrasia miondrika izay manondro fotsiny fa misy demaokrasia amin'ny alàlan'ny paikan'ny herinaratra) dia tsy maintsy tapaka voalohany amin'ny taolana. Noho izany dia tsy tokony hanome anao ny maha-ara-dalàna azy io ary hampihena ny rafitra manontolo.
23 May 2019 amin'ny 10: 37
Tiako ny sambo.
Olona vitsivitsy eny an-tsambo dia mahafantatra fa hitsidika firenena iray ho azy ireo izy ireo
izay tokony hiasa ho an'ny andevo avokoa ny olona rehetra ary avy eo ny tsirairay dia tokony hifidy izay kapitenin'ilay kapitaly ho any amin'ny nosy andevo.
Mbola mahafantatra azy ve ianao alohan'ny fifidianana?
Amin'izany fomba izany i Rutte dia mahazo tondro-propagandy rehefa tsy maintsy misafidy izy eo anelanelan'ny afobe sy ny lanitra, vakiana, tsy sangisangy izany, fahamarinana mangidy
23 May 2019 amin'ny 22: 13
Eny, mazava ho azy tampoka dia nandresy ny PVDA ... hahaha ahoana no azo atao?
27 May 2019 amin'ny 09: 29
Ny fihemorana ny sambo "marina" dia efa nanomboka:
Fahavoazan'ny fifidianana, 'eo amin'ny sisin'ny tanàn-dehibe' (subliminal amin'ny 'sisan-java-mitranga'), jereo eto:
« Omeo fanafintohinana ny fampahalalam-baovao, manolotra sekreteram-panjakana (Harbers): marketing marketing
Resadresaka mivantana miaraka amin'i Martin Vrijland ao amin'ny Telegraaf.nl miaraka amin'i Wilson Boldewijn (lahatsary) »
Total visits: 10.923.243
Manana fifandraisana amin'ny lehilahy mpandova ve i Elon Musk? Halalino ny mozik'ireny Grimes ireny eto
Martin Vrijland op Fampahalalana lehibe ho an'ny fiainanao ankehitriny
hans coudyser op Fampahalalana lehibe ho an'ny fiainanao ankehitriny
guppy op Manana fifandraisana amin'ny lehilahy mpandova ve i Elon Musk? Halalino ny mozik'ireny Grimes ireny eto